Somaliland.Org » “Mudane Madaxweyne, wixii khuseeya arimaha doorashooyinka waxaanu kuula macaamilaynaa gudoomiyaha xisbiga UDUB,” Komishanka Doorashooyinka oo jawaab ka bixiyey Hadalkii Riyaale Somaliland.Org
“Mudane Madaxweyne, wixii khuseeya arimaha doorashooyinka waxaanu kuula macaamilaynaa gudoomiyaha xisbiga UDUB,” Komishanka Doorashooyinka oo jawaab ka bixiyey Hadalkii Riyaale
April 30th, 2008 Comments Off Hargeysa (Somaliland.org) – Komishanka Doorashooyinka Qaranka ayaa jawaab ka bixiyey khudbaddii Madaxweyne Riyaale shalay u jeediyey labada gole ee Baarlamaanka oo uu dhalliil ugu jeediyey Komishanka Doorashooyinka iyo dhalliilo iyo eedaymo hore oo Madaxweynaha iyo xisbigiisa UDUB qoraallo ugu gudbiyeen Komishanka.
Komishanka Doorashooyinku waxa uu hadalka Madaxweynaha kaga jawaabey warsaxaafadeed xambaarsan xogwarran, garnaqsi, badheedhaha Komishanka iyo talabixin ku wajahan xaaladda oo uu maanta soo saaray Komishanku, iyada oo uu Komishanku iska leexiyey xil-gudasha la’aan iyo aqoon la’aan sharci oo uu Madaxweyne Riyaale ku dhalliilay.
Warsaxaafadeedkaas oo uu ku saxeexan yahay Guddoomiyekuxigeenka Komishanka, Xirsi Cali X. Xasan, isaga oo dhammaystiran, waxa uu u qoran yahay sidan:
“Hadalka Madaxweynaha: -
Komiishanka Doorashooyinka Qaranka anoo marar badan oo hore idiin sheegay, waxaan idin leeyahay si mug leh u barta Xeerarka tilmaamaya xil-gudashadiina oo kala ah Xeerka Doorashada Dawladaha Hoose iyo Madaxtooyada Xeer Lam, 20/2001 & Xeerka Diiwaan-gelinta Cod-bixiyayaasha ee Xeer Lam, 37/2007, la idiinkama fadhiyo in aad la timaadaan aaraa iyo talooyin aan Xeerarka ku aroorin, ka baaqsashada aad ka baaqsataan waajibaadka ku cad labadaa Xeer, waxay idin geyeysiin doonaan xil gudasho la’aan. Waxana waajib idinku ah in aad u raacdaan Xeerarkaas siday u kala horreeyaan, ogaadana in aad tihiin Hay’ad Xeer fullineed ee aydaan aheyn Hay’ad Xeer Dejineed.
Cidii sharciga ku dhaqmiwaydaa way-saqiiridoonaan (deith pre-majur)!!!
Gudida Komishinka ee cusub waxaa la doortay date Feb-Aug 2007 waxaa la ansixiyay date Jun-Aug 2007 waxaa la dhaariyay date 08-Aug-2007. Waxay shaqada bilaabeen date 09-Aug-2007
Isla markii la dhaariyay gudidu waxay bilawday aqoon-iswaydaarsi (workshop) ay ugu anbabaxeen magaalo madaxda wadanka Ethoipia taasoo ay soo qababaasisay hay’ada la shaqaysa Komishinka ee Inter-peace, waxaana maalgeliyay aqoonis-waydaarsigan Safaarada Ingiriiska ee Addis-ababa.
Waxaa komishinka aqoon-iswaydaarsigan kala qaybgalay hawlwadeeno iyo masuuliyiin ka kala socda .
Inter-peace (Technical assistant Institution of Nec)
Donor Steering committee.
Gebgebadii iyo xidhitaankii, safaaradda Ingiriisku waxay samaysay xaflad balaadhan oo ka dhacday safaaradda gudaheeda oo ay komishinka kala soo qaybgaleen safaarada iyo dublamaasiyiin wadamada. EU Commission, Norway, Sweden, Holland, Spain Gerik iyo Poland. Komishinka, Interpeace iyo IRI oo wada socdaa waxay wadamadaa ka codsadeen inay caawiyaan dimuquraadiyada Somaliland.
Komishinku wuu cusbaa waxaana sugayay hawlo aad u waawayn, jawiga siyaasadu muu fiicnayn oo waxa jiray khalaaf ba’an oo u dhaxeeya golayaasha, gaar ahaan Madaxweynaha iyo Golaha Wakiillada sidoo kale xisbiga mucaaradka ah ee Kulmiye iyo dawlada waxaa jiray waxoogaa xurguf siyaasadeed ah oo ka dhalatay xulistii iyo ansixintii komishinka kaasoo ku keenay kala fogaansho iyo murug siyaasadeed.
QARAN: oo ah urur siyaasadeed oo doonayay in la diwaangeliyo ayaa dawladu xidhxidhay madaxdiisii waxaanay sii kordhisay arintani murugii siyaasadeed ee jiray.
Si kastaba ha ahaatee xisbiyadu waxay kala taagnaayeen mawqifyo kala duwan oo u baahnaa in wakhti badan lagu bixiyo sidii loo samayn lahaa wax heshiis lagu yahay oo komishinku ku dhaqaaqo.
UCID : waxaa ka go’nayd in la galo diwaangelin ka dibna doorashada la galo waxaana ka muuqatay inay aaminsanyihiin in diwaangelinta lagu dhamayn karo muddo kooban, waxay jeclaysanayeen in doorashada madaxtooyada la hor-galo dawladaha hoosena la dabamariyo madaxtooyada oo wakhti badan dib loo dhigo. Waxaanay mararka qaarkood ku hanjabeen in aanay doorasho galayn hadii aan la qaban diwaangelin.
UDUB: waxay jeclaysanayeen in labada doorashoba dib loo dhigo lana galo diwaangelinta waxaana ka muuqatay in diwaangelinta xooga saarayaan, sidoo kale waxay ku adkaysanayeen in labada doorasho ay sidoodii u kala horeeyaan oo marka hore la galo tan Dawladaha Hoose ka dibna la galo tan madaxtooyada.
KULMIYE: waxaa ka go’nayd in la galo doorashada madaxtooyada diiwaangelinta iyo doorashada dawladaha hoosana dib loo dhigo, sidoo kale waxay u arkayeen in diwaangelintu wakhti badan u baahantahay oo ay doorashadu ka mihiimsan tahay.
KOMISHINKA: waxaa jiray faham odhanayey in lacagtii diwaangelinta gacanta lagu hayo sidoo kale in International community-gu ay doonayaan in diwaangelin la qabto oo doorashada laga horaysiiyo, balse may jirin cid nagu khasabtay ama culays nagu saartay inaan qabano diwaangelinta oo aan ahayn xeerka diwaangelinta iyo baahida loo qabo doorasho xor iyo xalaal oo qofwaliba uu hal cod bixiyo.
Waxaa jirtay in wakhtigii doorashada dawlada hoose iyo madaxtooyada uu aad cidhiidhi u ahaa, sidoo kale ay jirtay Diwaangelin uu qeexay sharci oo ku waajibinaya komishinka inay fuliyaan balse ay su’aali ka taagnayd doorashada miyaa laga horaysiiyaa mise waa laga danbaysiiyaa? waxaana laysla gartay in kulamo lala yeesho xisbiyada qaranka si loo helikaro heshiis qaran oo ku wajahan qaabka iyo wakhtiga la bilaabayo diwaangelinta iyo doorashooyinka iyo sidoo kale midka soo horaynaya (doorasho mise diwaangelin)
Diwaangelinta xeer baa qeexay kuna waajibiyay komishinka inuu fuliyo sidoo kale waxaa ku adkaystay inay dhacdo doorashada horteed xisbiyada Ucid/Udub balse wakhtiga doorashada ka hadhay kuma filayn in lagu fuliyo diwaangelinta sida dastuurku qeexayna doorashada madaxweynaha waxaa lagu kordhin karaa Amni daro oo keliya, diwaangelintu kama mid aha waxyaabaha madaxweynaha loogu kordhinkaro hadii aanu jirin Hashiis qaran oo mugleh (National censuses)
Doorashada waxaa soo horraysay tan dawladaha hoose oo markaa ay ka hadhsanaayeen wakhti aad u yar oo aan ku filayn in doorasho loogu diryaargaroobo sidoo kalena waxaa jiray labada xisbi Ucid/Udub oo ku adkaysanayay in doorashada horteed la qabto diwaangelin. Waxaa kaloo jirtay komishinka faham odhanayey in lacagtii diwaangelinta gacanta lagu hayo sidoo kale in International community-gu ay doonayaan in diwaangelin la qabto oo doorashada laga horaysiiyo.
Si kastaba ha ahaatee waxaan komshinku talo la yeeshay sharciyaqaano muwaadiniin ah iyo kuwo shisheeyo (International legal advisers) iyo khabiiro hore ugasoo shaqeeyay doorashooyinkii hore kuwaas oo sheegay in loo baahanyahay hashiis qaran si looga gudbo muran sharci oo yimaado.
Waxaana komishinka ka go’nayd diyaarinta miisaaniyada iyo baadidoonkeeda oo u baahnayd in loo bandhigo wadamada deeqda bixiya ee Somaliland ka caawiya doorashooyinka.
Waxay bilaabeen komishinku shirar isdabajoog ah oo ay la gelayaan xisbiyada qaranka si loo gaadho heshiis qaran oo ku wajahan diwaangelinta iyo doorashooyinka waxaana muddo ka dib laysla gaadhay in diwaangelinta la galo lana dhameeyo 10 June, 2008, in doorashada dawladaha hoose la galo 1st July 2008 in doorashada madaxtooyada la galo 31st Aug, 2008.
Heshiis intii aan la saxeexin ka hor waxay xisbiyada mucaaradku muujiyeen werwer ku wajahan guurtida iyo in laga keeno damaanad qaad in aanay wakhti kale u kordhinayn madaxweynaha. Sidoo kale waxaa shuruudahooda ka mid ahaa in Madaxweynaha ama Madaxweyne xigeenku uu heshiiska wax ka saxeexo.
Komshinku waxay kulamo la yeesheen shirgudoonka iyo xubnaha joogtada ee golaha guurtida iyaga oo waydiistay inay ixtiraamaan wixii wakhti lagu heshiiyo ee xisbiyada iyo komishinku isla gartaan waanay balan qaadeen golaha guurtidu inay ixtiraamayaan wixii lagu heshiiyo.
Shirgudoonka guurtida waxaa lagu casuumay inay yimaaddaan xaflada heshiiska si ay goobjoog uga noqdaan ugana cadeeyaan mawqifkooda ah inay ixtiraamayaan heshiiska qaran ee dhex maraya xisbiyada iyo komishinka balse may kasoo xaadirin xafladii sidoo kale madaxweyne ku xigeenka oo loo qoondeeyay inuu saxeexo heshiiska wuxuu u igmaday xoghayaha guud ee Udub balse wuxuu ahaa goobjooge.
Komshinku waxay shirar googoos ah la yeesheen madaxweynaha, shirgudoonka golaha wakiilada iyo shirgudoonka golaha guurtida waxaanay ujeedadu ahayd in ay komishinku u gudbiyaan golayaasha fariintii ay kala kulmeen beesha caalamka oo ay kamid ahayd in xadhiga laga siidaayo siyaasiyiinta ururka Qaran, lana dhawro hanaanka dimuquraadiyada si loo helo nabadgelyo iyo maamul wanaagsan sidoo kale waxay xubnaha komishinku ku dadaalayeen in goloyaasha laysu soo dhaweeyo.
Dhamaan gobobolada dalka oo ay ka mid yihiin Sool iyo Sanaag-bari waxaa komishinku ku tegay sahan labo jeer, kamana jirto amaandaro ee waxay u baahantahay in maamulka lagaadhsiiyo lagana qanciyo tabashadooda lana siiyo mudnaan xaga horumarka ah balse ma jirto cid xabad iyo dagaal lagu soo xerogelinayo.
In aan soo bandhigo xogta dhabta ah iyo meesha ay marayso hawsha komishinka si aan jaanis u siino inta Somaliland dani ka hayso ee ay ugu horayso goloyaasha qaranka, ururada bulshada, Hay’adaha samafalka iyo wadamada deeqda bixiya ee caawiya doorashooyinka iyo degenaanshaha Somaliland.
Inaan caddeeyo baaxada hawsha, duruufaha ku xeeran Komishinka, waxa laga doonayo iyo dhibta ay keensankarto hadii komishinku kasoo bixiwaayo kaalintiisa.
Si aan u titiro mala-awaalka iyo wararka aan saxda ahayn si-aan meesha uga saaro war guracan oo keeni kara talo guracan oo lagu hoobto.
Inaan iftiimiyo caqabadaha hortaagan komishink